Mepụta mpaghara ọhụụ dị n'èzí
Na Mee nke 2020, The Besttone co., Ltd guzobere ngalaba ọhụrụ- Ngalaba na-echebe ngwaahịa n'èzí. Malite nyocha na imepụta ngwaahịa nchebe n'èzí. Afọ 20 gara aga, The Besttone etoola n'ime nnukwu ụlọ ọrụ zuru oke ma tozuru oke maka uwe na-enyocha ma de ...
Nye aka na Mgbochi Ọrịa Ọrịa Worldwa
Emetụta ọnọdụ ụwa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ, ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-amalite nyocha masks na ihe nkpuchi ngwaahịa ngwa ngwa, iji mee mbọ nke anyị maka mgbochi ọrịa ụwa. Kemgbe njedebe nke 2019, China mere nnukwu oria ohuru ohuru coronavirus (akpọrọ COVID-2019), nke ...
E wuru ụlọ ọrụ kachasị mma ma tinye ya na mmepụta
Na 2017, ụlọ ọrụ kachasị mma nke Besttone wuru ma tinye ya na mmepụta. Thelọ ọrụ a nwere ihe karịrị ndị ọrụ 500, gụnyere ndị njikwa 7, ndị ọkachamara 30 na ndị ọrụ 380 magburu onwe ha na usoro mmepụta. O nwekwara ulo akwukwo ihe omuma ndi ozo di iche iche, dika ime ihe, igbutu, ikwa akwa, njedebe ...